N'akwụkwọ Ota Ward Cultural Arts Information Paper "ART bee HIVE" nke Ota Ward Cultural Promotion Association bipụtara, onye nta akụkọ "Mitsubachi Corps" ga-ekpuchi ihe omume omenaala!
Biko zitere anyị arịrịọ mkpuchi ma ọ bụ ozi gbasara mmemme metụtara omenaala na nka, dị ka mmemme nka, mmemme nkwalite nka na ebe nka.
Na-achọ arịrịọ ajuju na ntinye ozi!
N’akwụkwọ ozi “ART bee HIV”, onye nta akụkọ ward “Mitsubachi Corps” ga-ekpuchie omenaala na ọrụ nka!Biko zitere anyị arịrịọ mkpuchi ma ọ bụ ozi gbasara mmemme na omenaala, dịka mmemme nka, mmemme nkwalite nka, na ebe nka.
* A ga-ekpebi mbipụta ma emesịrị nzukọ nchịkọta akụkọ.Dabere na ọdịnaya na ohere, anyị nwere ike ọ gaghị enwe ike ibipụta.Biko rụba ama.
・ Ihe omume nke otu omenaala na omenaala gbadoro ụkwụ na Ota Ward na ala ịta ahịhịa nke Ota Ward
Omume omenala na nka nke ụmụ akwụkwọ bi, na-arụ ọrụ, ma na-agụ akwụkwọ na Ota Ward
・ Ihe aga-eme n’abaghị n’akwụkwọ
1. XNUMX.Dị raara maka homepage
2. faksị (03-3750-1150)
3. XNUMX.Ota Citizen's Plaza, Ota Citizen's Hall liclọ Nzukọ Aplico, Ota Bunkanomori Window ọ bụla
Dị raara maka homepage
(1) Ihe ndị nwere ike imebi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ugwu nke mkpakọrịta
(2) Ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọrụ okpukpe, echiche na nkwalite onwe onye
(3) Ihe o bula megidere udo obodo na ezigbo agwa na omenala
(4) Azụmaahịa ndị dabere na Iwu na Iwu nke Azụmaahịa Ahịa, wdg na Njikwa Azụmaahịa (Iwu Nke 23 nke July 7, 10)
(5) Ihe ndi iwu machibidoro ma ọ bụ nwere ike ịda iwu
(6) Ndi ozo achoputara na ha nwere otu nsogbu ha na ndi mmadu
Pịa ebe a maka ụdị ntinye banyere arịrịọ / ndokwa